Enbridge Burinta Kalamazoo River Sifee nadiifinta nadiifinta iyo soo celinta
MAGAALADA BULSHADA, MI - Tani waa xagaagii ugu dambeeyay Wabiga Kalamazoo wuxuu noqon doonaa goob ay ka socoto howlo culus oo qodis ah, maaddaama shirkadda Enbridge Inc. ay nadiifineyso qashin ka soo baxa dhuumaha daadiya oo u diray qiyaastii 800,000 oo galaan oo saliid ceyriin ah oo la galiyay Talmadge Creek iyo webiga.
Ku dhawaad ​​afar sano kadib markii qulqulka la helay bishii Luulyo 26, 2010 oo u dhow Marshall, shirkadda dhuumaha qaada ee reer Kanada ayaa soo duubaysa nadiifinta.
Hor-joogaha xaafada xaafada Ann Nieuwenhuis ayaa sheegtay in shaqadeeda bariga magaalada Kalamazoo County ay ku dhaqaaqday sifiic badan oo ka baxsan aragtida bulshada isla markaana ay muuqato in aysan jirin wax isbadal ah.
"Labadii usbuucba mar (Hay'adda Ilaalinta Deegaanka Mareykanka) waxay isku dubaridaa kulan daneeyayaal oo ka dhaca Marshall oo aan shakhsi ahaan ama taleefan uga qeyb galo," ayuu yiri Nieuwenhuis. “Labo toddobaad ka hor waxaan weydiistay inaan aado goobta. Dareenkeygu waa inaan haynaa nooca Cadillac (ee howlaha qoditaanka). Qandaraasle hoosaadka ayaa feker badan galiyay sida loo dejiyo, ”ayay tiri, taasoo dhalisay xasillooni, hufnaan, hawlgal ammaan ah
"Waxay ku jihaysan yihiin waqtiga aan u qorsheynay iyaga, waxaanan kalsooni ku qabaa in dhulka dib loogu celin doono sidii uu ahaa (ka hor inta uusan daadin) dhamaadka Nofembar, oo ahayd heshiiskii heshiiska," ayuu yiri Nieuwenhuis.
Afhayenka Enbridge Jason Manshum ayaa sheegay in marka laga saaro ciidda wasakhaysan ee Morning Lake delta ay dhamaatay, kaas oo la rajaynayo in uu noqdo bartamihii-ilaa dabayaaqadii xagaaga, shaqada sida ku xusan xeerka Maarso 2013 ee EPA ay dhamaystiri doonto. Dib u soo celinta webiga ayaa sii socon doonta inta lagu guda jiro deyrta oo dhan inta u dhexeysa xadka 35-mayl ee marinka biyoodka degmooyinka Calhoun iyo Kalamazoo oo ay ku xirnaayeen nadiifinta qulqulka, ayuu yiri.
Tan iyo markii laga sii daayay saliida ceyriin culus nidaamka shidaalka ee Enbridge, gobolka iyo dowlada dhexe waxay iskaashi la sameeyeen kormeerka xakameynta iyo ka saarida saliida deegaanka ku xeeran.
"Waxaan keeneynaa carro iyo dhir wadaniyadeed iyo geedo si aan uga dhigno meel cagaaran oo qurxoon sida ay u ekaan laheyd hadii uusan waligood halkaas ku daadin," ayuu yiri Manshum, "heshiiskeena aan la galnay (Waaxda sinaanta deegaanka ee Michigan iyo Waaxda Kheyraadka Dabiiciga ah ee Michigan).
Kadib, marka laga reebo kormeerka deegaanka ee xilliyada, shaqada Enbridge way dhammaan doontaa, ayuu yidhi Manshum. “Hadii ay jirto baahi loo qabo in meel gaar ah wax laga qabto (waan soo laaban doonaa), laakiin inta aan ognahay, waxaan ku jirnaa heerarkii ugu dambeeyay.”
Shirkadda waxay markii hore rajeyneysay in lagu qabto shaqada qallafsan ee Morning Lake dhammaadka 2013, laakiin waxay dhib ku noqotay helitaanka goob la aqbali karo oo loogu talagalay qashin-qubka si ku-meelgaar ah u haysa qalabka ka hor inta aan la daadgureynin. Bishii Febraayo, Enbridge wuxuu oggolaansho ka helay Guddiga Qorsheynta Magaalooyinka ee Comstock Township si uu u dhigo tuubada qashin-qubka warshadaha Benteler, oo ku yaal waqooyiga harada dhanka Bariga Michigan Avenue.
Ansixintaas waxay kuxirantahay Enbridge iyadoo la adeegsanayo wado gaari xamuul ah oo iska ilaalineysa isgoyska Michigan Avenue iyo King Highway, ilaa xamuulka 200 maalin walba gaadiid wasakheeya goobta kana keena qashin qubka. Xaaladda kale waxay ahayd in Enbridge ay dejiso kormeerayaal hawo oo hawo ku habboon oo ku dhow Fleetwood Neighborhood.
Tan iyo markii howsha qodaya ay bilaabatay, Nieuwenhuis wuxuu yiri, "labo jeer oo kaliya ayaa nala soo wacay - Abriil 22 dadka qaar ayaa ka cawday ur naaftada. Gawaari fara badan ayaa ku jiray gudaha iyo dibedda maxaa yeelay taasi waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee xaddidaadda culeyska laga qaaday. ”
Waqti kale oo qof loo yaqaan ka cabashada urka, ayay tidhi.
Shaqada la qabanayo xagaagan waa mid ka fog aragtida xaafada Fleetwood, oo ay qariyeen berri wasakh ah, iyo hawada iyo sawaxanka ayaa lala soconayaa si loo hubiyo inaysan wax lug ah ku imaan doonin dhismaha Kubbadda Wenke ee ku taal Park Oaks Park.
Gawaarida xamuulku waxay muujiyeen u hogaansanaan adag jidadkooda la ansixiyay, ayuu yiri Nieuwenhuis. "Ilaa hadda, aad u fiican," ayay tiri.
Dhanka sare iyo meel u dhaw goobta tuubbada dhuumaha, halkaas oo qashin-qubka iyo hawlihii kale ee nadiifinta la bilaabay, gobolka ayaa si weyn ugu lug leh kormeerka dib u soo celinta wabiga, ayay tiri Michelle DeLong, Madaxa Qaybta Jawaabta Enbridge ee Qeybta Kheyraadka Biyaha ee MDEQ. Taasi waxay ka dhigan tahay taabashada dhinacyada kanaalka, rakibidda qoryo leh qaab xidid oo ku lifaaqan abuuritaanka deegaanka kalluunka, dhismooyinka barkadaha dhaadheer oo leh aagagga dhagaxyada leh iyo ku shubista burush wabiga webiga. Beeritaanka waxaa la sameyn doonaa dhamaadka xagaaga iyo deyrta.
Intaas waxaa sii dheer, saraakiisha gobolka "wali way kormeerayaan waxayna la shaqeyn doonaan Enbridge maadaama EPA ay ka baxeyso goobta marka qashin qubka la sameeyo," ayuu yiri DeLong.
"Waqtiga qaarkood, markii US EPA ay ka baxdo mashruuca, waxaan bilaabi doonnaa barnaamijkeena kormeerka iyo qiimeynta muddada dheer ee Waaxda Tayada Deegaanka ee Michigan," ayay tiri.
Steve Hamilton, madaxweynaha golaha Kalamazoo River Watershed Council, ayaa sheegay in dareenkiisa ka soo qeyb galka shirarka joogtada ah ee socdaalka iyo socdaalka qulqulatooyinka Morning Lake isbuucyo ka hor ay tahay in qulqulatada ugu dambeysa ay si wanaagsan u socoto.
"Enbridge iyo qandaraaslayaashooda, iyo sidoo kale EPA iyo DEQ, wax badan ayey ka barteen qibrad hore oo ay u qodeen meelo kale oo ka mid ah nidaamka wabiga, waxayna soo saareen nidaam aad u habeysan oo loogu talagalay xaaladaha maxalliga ah," ayuu yiri. “Waxayna ila tahay inay ii cadahay inaynan u tudhin wax kharash ah oo si sax ah oo nabadgelyo leh wax loogu qabto, iyo in la hubiyo in qiiqa hawada sii daayaa aanu dhibaato lahayn. Marka, wax cabasho ah kama jiraan aragtideyda. ”